Mareykanka oo beegsaday goob Al-Shabaab qarax ku diyaarinaysay | KEYDMEDIA ONLINE
Mareykanka oo beegsaday goob Al-Shabaab qarax ku diyaarinaysay
Al-Shabaab iyo Daacish ayuu Mareykanka dagaal kula jiraa, waxuuna saldhigyo qarsoodi ah Ciidamadiisa ku leeyihiin qeybo kamid ah dalka, sida Balli-Doogle [Sh/Hoose] oo ay ka duulaan diyaaradaha drones-ka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xubin katirsanayd Kooxda Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo Mareykanka shalay, August 20 ka fuliyay degmada Kurtun-waarey, ee gobolka Shabeellaha Hoose, oo dhaca Koonfurta Soomaaliya.
Taliska Mareykanka ee Africa [AFRICOM], ayaa qoraal uu soo saarey ku sheegay in bartilaameedka uu ahaa goob lagu diyaarinayay qaraxa oo degmada la duqeeyay katirsan, waxaana sidoo kale lagu burburiyay mooto iyo qalab kale.
Inta badan AFRICOM ayaa sheegta in howlgalkeeda uusan shacabka khasaaro kasoo gaarin, laakiin hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa baaritaan ku ogaadey inay jiraan waxyeello rayidka kala kulmaan duqeymaha Soomaaliya.
0 Comments Topics: alshabaab duqeyn mareykanka